Xildhibaanada Baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulmaya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xildhibaanada Baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulmaya
Golaha shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Maanta kulankoodii Caadiga ahaa ku leh Xaruunta Golaha shacabka ee Magaalada kulanka oo lagu soo afjaraayo su,aalo waydiinta Wsiirka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka xukumadda Soomaaliya C/raxaan Xoosh Jabriil ayaa waxaa lagu wadaa in maanta uu hortago kulanka Baarlamaanka Soomaaliya si xal looga gaaro Arrimaha ku aadan su,aalo wadiinta Wasiirka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u yeeray Wasiirka si ay wax uga wadiiiyaan Arimo ku saabsan go,aan uu ku raacay Maxkamada Sare ee Dalka taasoo ku aadanayd muran ka dhashay doorashada siddeed Xildhimaan.
Waxaase maanta go,aanku yahay in lasoo gaban gabeeyo dooda Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jabriil taasoo dhalisay dood badan.
Wixii faahfaahin ah kala soco halkaan:
Previous articleDowladda Maraykanka oo qabtay afar qof oo qoraallo sir ah faafiyey
Next articleMadax katirsan Jubbaland iyo K/Galbeed oo Baydhabo uga qeybgalay bandhigga hidaha iyo dhaqanka suuban